थप चुनावी टिपोटहरू
१. आचारसंहिता मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वदलीय बैठकमा जब आचारसंहिताबारे ‘आदर्श’, ‘बौद्धिक’ र ‘भद्र’ छलफल भयो, मलाई हाँसो थाम्न हम्मेहम्मे भयो । ‘मीठो’ छलफलपछि मीठो चियाले मन हरर बनाएर सबै बाहिरिए ।...
चुनावी वातावरण कसले बनाउँछ ?
एमालेले दाबी गर्दै आएका धेरै ‘लालकिल्ला’हरू स्थानीय निर्वाचन – २०७९ मा गल्र्यामगुर्लुम ढले । एमालेको मुख्य आधार मानिएको लुम्बिनी, अनि लुम्बिनीको केन्द्र बुटवल उपमहानगरपालिका पनि एमालेले जोगाउन सकेन ।...
मध्यपुर थिमी वडा. न. ८ मा नेमकिपा विजयी
मध्यपुर, ३ जेठ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नं ८ को वडाअध्यक्ष पदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार रमेश थापा श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ । उहाँ एक हजार...
भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाको विजय ¥यालीका केही झलक
दैलेख चाविनपामा विजय जुलुस
दैलेख, ३ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट दैलेख चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको विजय जुलुस सोमबार सम्पन्न भयो । चामुण्डाविन्द्रासैनी नपाको वडा नं १, ३ र ७ मा...
“नेमकिपालाई मत दिनु देशभक्तहरूको पक्ष लिनु हो”
भक्तपुर, ३ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नगर समिति भक्तपुरको आयोजनामा मङ्गलबार मतदाता तथा नगरवासीहरूमा धन्यवादज्ञापन ¥यालीको आयोजना ग¥यो । भक्तपुर नगरपालिकाको लागि नेमकिपाका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउन साथ र सहयोग...
नेमकिपाको जीत देशभक्तहरूको जीत
भक्तपुर, २ जेठ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा भक्तपुर नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू तथा वडा सदस्यहरूसहित सबै पदमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले विजय हासिल गरेको छ । नेमकिपाले...
कालीकोट र दैलेखमा नेमकिपाका उम्मेदवारहरू विजयी
कालीकोट, १ जेठ । कालीकोट जिल्ला शुभकालीका गाउँपालिका वडा नं ३ को वडा अध्यक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी विजयी भएको छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा...